Warar hor leh oo ka soo baxaya dhaawaca Paul Pogba – Gool FM
Warar hor leh oo ka soo baxaya dhaawaca Paul Pogba
Byare March 25, 2017
(England) 25 Mar 2017. Warar hor leh ayaa ka soo baxaya dhaawaca xiddiga ugu qaalisan kubbada cagta adduunka ee Paul Pogba iyadoo la warinayo inuu ka soo hor mari karo waqtiga markii hore la mooday inuu dib ugu soo laabanayo garoomada.
Xiddiga reer France ayaa garoonka laga saaray isagoo dhutinaya kulankii Europe League ay Man United ka adkaatay kooxda Rostov iyadoo looga shaki qabay dhaawac muruqa ah.
Macallinka mayilka adag ee Jose Mourinho ayaa dhaawaca Pogba ku eedeeyay daal daran sababo la xiriira jadwalka kulamada Man United uu ku sheegay mid aad u mashquul badan.
Yeelkeede, The Mirror ayaa sheeganeysa in Pogba uu durba hayo wadada soo kabsashada isla markaana lagu murmi karo soo laabashadiisa marka laga soo laabto kulamada caalamiga ah ee iminka lagu maqan yahay.
Wararka ayaa sheegaya in Red Devils aysan qabin wax rabitaan ah inay garoomada kula soo deg degto xiddigeeda reer France si aysan khatar ugu galin inay sii ballaariso waqtiga uu garoomada ka sii maqnaanayo.
Laakiin Pogba ayaa dib loo heli karayaa kulanka ay Old Trafford ku marti galin doonaan Everton 4-ta bisha Abriil.
Haddii ay waaxda caafimaadka Man United go’aansdaan inay dib u dhigaan soo laabashada Pogba intaa kaddib waxaa la heli doonaa kulanka ay u safrayaan Sunderland 9-ka Abriil.
Morata oo doonaya Chelsea iyo Conte oo caqabad ku ah
Gabdhaha Heegan iyo Gaadiidka oo galabta ku ballansan garoonka Wiish